I-Villa 'Ngaphansi Kophahla Lotshani' | Amahlathi & fens - I-Airbnb
I-Villa 'Ngaphansi Kophahla Lotshani' | Amahlathi & fens
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Marijke
U-Marijke Ungumbungazi ovelele
Igumbi lokulala, igumbi lokugezela kanye negumbi lokuhlala lapho unokuhlala khona, usebenze noma udle isidlo sasekuseni. Futhi lokho konke ngokwakho.Igumbi lokulala elibanzi linombhede ophindwe kabili ngombono wengadi enhle. Indlu yokugezela ineshawa, usinki kanye nendlu yangasese.Igumbi lesi-2 liyigumbi lokuhlala elithokomele elinendawo yokuphuzela utshwala ne-TV. Eduze kwe-Oisterwijk ebukekayo, amahlathi amahle nezinsika, indawo yokulondoloza imvelo i-De Kampina, i-Abbey Koningshoeven (igumbi lokunambitha).
Igumbi lokulala libanzi futhi linombhede ophindwe kabili owakhiwe ngezinto zokulala zelineni. Igumbi elikhanyayo lapho kusetshenziswe khona imibala efudumele.Uneketela, umenzi wekhofi nomabonakude. Ingadi inkulu inamathala amaningana lapho ungahlala khona ukudla kwasekuseni noma ufunde incwadi buthule.Indawo ethulile, eduze kwazo zonke izinsiza. Igumbi lesi-2, igumbi lokuhlala, linosofa, ideski kanye ne-minibar.Nalapha futhi unombono wengadi. Ibhulakufesi nalo liyanikezwa kuleli gumbi.Unenombolo yamagumbi angasese uwedwa, kodwa futhi nokunakekelwa okuhle komnikazi.
100% ubufakazi beCorona.
I-Oisterwijk yaziwa ngamahlathi ayo nezinsika. Ungajabulela ukuhamba nokuhamba ngebhayisikili lapha.Isiqiwu iDe Kampina singaphakathi kwebanga lokuhamba ngebhayisikili. Kude kancane kunesiqiwu iDe Drunense Duinen.Isikhungo sase-Oisterwijk siyanconywa. Isikhungo esimnandi esinezitolo eziningi, amasimu nezindawo zokudlela.Futhi vakashela i-abbey edumile i-De Koningshoeven lapho unganambitha khona ubhiya omnandi weTrappist. Kuningi esingakuzwa endaweni.
UMarijke Ungumbungazi ovelele